ऋतिकको पहिलो कमाई कती थियो ? सुन्नु भो भने छक्क पर्नुहुनेछ « Light Nepal
ऋतिकको पहिलो कमाई कती थियो ? सुन्नु भो भने छक्क पर्नुहुनेछ
Published On : 12 January, 2018 12:32 pm
बलिउड एक्टर ऋतिक रोशन आज आफ्नो ४४ औ जन्मदिन मनाउदै छन् । चलचित्रमा उनी भिलेन संग लडिरहेका हुन्छन् । तर रियल लाईफमा भने उनी बिल्कुल फरक छन् । ऋतिकको जन्मदिनमा उनको खास कुरा बताउदै छौ, जुन तपाईंलाई पनि थाहा नहुन सक्छ ।
के तपाईंलाई थाहा छ ऋतिकको पहिलो कमाई कती थियो? ,कती बर्षको उमेरमा उनी बलिउडमा प्रवेश गरे ? उनको पहिलो कमाई सुनेर तपाईं चकित पर्नुहुनेछ । उनले ६ बर्षको उमेरमा आशा चलचित्र बाट डेब्यु गरेका हुन् । उनले उक्त चलचित्र बाट १०० रुपैयाको चेक लिएका थिए ।
ऋतिक रोशन स्कोलियोसिस नामक बीमारी बाट पीडित थिए । करीब छ बर्षको उमेरमा उनले उक्त रोग बाट छुट्कारा पाएका हुन् ।
हामीले बच्चा बेलामा डायरिमा लेख्ने गर्दथेउ तर ऋतिक अझै पनि आफ्न कुरा हरु डयरि मा लेख्ने गर्दछन् ।
ऋतिक को पहिलो चलचित्र १४ जनवरी २००० मा रिलीज भएको थियो । उनको पहिलो चलचित्र हिट भएका कारण उनको फिमेल फ्यान बढेका थिए । त्यसैको प्रभावमा उनलाई भ्यालेनटाईन डे मा ३०००० विवाहको प्रपोज आएको थियो ।
जुन साल ऋतिकले बलिउडमा कदम राखेका थिए त्यही साल 21 जनवरीमा उनको पिता राकेश रोशन लाई मुंबई माफिया ले हमला गरेका थिए । जसको कारण ऋतिकडराएका थिए र उनी बलिउड छाड्न समेत तयार थिए । भनिन्छ ”कहो ना प्यार है ” को धमकेदार कमाईका निमित्त उक्त हंगमा गरेका थिए ।
बाहिरियो भिडियो, नेपाल आइडलमा जानु अघि बारमा यसरी गाउथेँ बिक्रम बराल (भिडियो)
काठमाडौँ। अहिले सबैतिर नेपाल आइडलकै चर्चा रहेको छ। नेपाल आइडलले अहिले हजारौं प्रतिस्पर्धीबाट आफ्नो टप
समर्थक भन्छन्, ‘नेपाल आइडलको उपाधि रविले नै जित्छ’
काठमाडौं, २५ मंसिर । नेपाल आइडलको दोस्रो संस्करणको ‘टप ४’ मा पुग्न सफल रवि ओडको चर्चा
गायिका नेहा कक्कडको ब्रेकअप भएपछि यस्तो पिडामा दिन बिताउदै
काठमाण्डौ – रियालिटी सोबाट आफ्नो करिअर सुरु गरेकी गायिका नेहा कक्कड अहिले आफैँ निर्णायकको रूपमा व्यस्त
‘सौतेनी आमा’ को मायामा हुर्केका रवी आफ्नी आमालाई सम्झंदै भावुक बने, यहि सानो झुप्रोबाट उनले गरेका रहेछन् सङ्घर्ष (भिडियो)
काठमाण्डौ – सुदुरपश्चिम प्रदेश धनगढीका रवि ओडं नेपाल आइडल सिजन – २ को उत्कृष्ट ४
बाहिरियो भिडियो, नेपाल आइडलमा जानु अघि
समर्थक भन्छन्, ‘नेपाल आइडलको उपाधि रविले
बांकेको कोहलपुर स्थित पप लाइफ इलेक्ट्रोनिक
गायिका नेहा कक्कडको ब्रेकअप भएपछि यस्तो
भर्खरै विबाह गरेको यो जोडीले नै